अरुका नजरमा गगन हिरोः गगनका नजरमा को हुन् ६ युवा नेता ?
प्रकाशित मिति : २०७३ पौष १३ बुधबार , ४६,२३६ पटक हेरिएको
काठमाडौं । पछिल्लो समय राजनीतिप्रति वितृष्णा बढे पनि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा युवानेताका रूपमा रुचाइएका छन् । यी नेताले आफ्ना समकालीन तथा अरू युवानेतालाई कसरी चिन्छन् त ? थापाले अलग–अलग पार्टीका ६ युवानेता छाने र उनीहरूबारे भने ।
उहाँमा फरक–फरक राजनीतिक धारलाई मिलाउन सक्ने क्षमता छ । उहाँले भरसक सबैलाई मिलाएर लाने कोसिस गर्नुभयो । सानो पार्टीको युवा नेता हुनुका बाबजुद उहाँमा राष्ट्रिय नेतामा हुनुपर्ने गुण छन् । (नयाँ पत्रिका दैनिक)